Fijerena fitomboana ho an'ny marketing amin'ny atiny | Martech Zone
Fijerena fitomboana ho an'ny marketing amin'ny atiny
Alakamisy Febroary 13, 2014 Alakamisy Febroary 13, 2014 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo antony tsy fivarotana votoaty ny masoivohonay dia satria tsy hamokatra atiny no tanjon'ny marketing an-tserasera fa ny hampivoatra ny orinasanao. Mamokatra atiny (infografika sy whitepapers) matetika ho an'ny mpanjifa izahay, fa ny fikitihana ny famoahana dia dingana iray monja amin'ny paikady lehibe kokoa. Ny fahatakarana hoe iza no soratanao ary karazana atiny tadiavin'izy ireo no tokony hitranga alohan'izay. Ary raha vao mamoaka ny atiny ianao, dia mila mahazo antoka fa syndicated sy avoaka tsara izy mba hampitomboana ny tratra.
Inona no atao hoe fanapahana fitomboana?
Misy sakana ambany amin'ny fidirana amin'ny famokarana vokatra ho an'ny tranonkala… fa ny famoahana ny teny dia mety ho lafo be. Ny fanombohana am-piandohana raha tsy misy ny vola hanaovana dokambarotra na hampiroborobo ny vokatr'izy ireo dia mety hanana paikady ara-barotra tsy nentim-paharazana hahazoana mpanjifa vaovao. Nanjary fantatra tamin'ny hoe fanapahana hacking ary nampiditra SEO, Fitsapana A / B ary Marketing amin'ny atiny.
Raha tianao hitombo ny bilaoginao dia mety te hianatra zavatra iray na roa amin'ilay mpijirika atiny ianao. Izy dia variana amin'ny fifamoivoizana ary tsy mifantoka afa-tsy amin'ny fitomboana. Ity infographic ity dia hanome anao mason-tsivana ao anaty psyche anatiny anatiny ary hanampy anao ho lasa mpijirika atiny anao manokana.
Ity infographic avy amin'ny olona ao amin'ny CoSchedule, kalandrie fanontana haino aman-jery sosialy mahafinaritra ho an'ny WordPress izay manana endri-javatra an-taonina. NAOTY: tetikady fanapahana hacking mahafinaritra ny Infografika!
Tags: Content Marketingcoschedulefanapahana hacking
zkipster: Vahaolana ho an'ny lisitry ny vahiny sy ny fihaonambe
Ny fitaovana mety ho an'ny fampielezana na fanentanana ny mpanao gazety